May 9, 2022 - Achawlaymyar
May 9, 2022 by Achawlaymyar
သ႐ုပ္ေဆာင္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ EAINDRA KYAW ZIN ေရေမႊး ေၾကာ္ျငာ ဗီဒီယိုေလး ျပည္သူခ်စ္ အကယ္ဒမီဆုရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Eaindra Kyaw Zin ေရေမႊး ေၾကာ္ျငာ ဗီဒီယိုေလး သ႐ုပ္ေဆာ င္အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ကေတာ့အမို က္စားသ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြနဲ ့အတူက်ရာဇာ တ္ေကာင္ေ တြမွာအေကာ င္းဆုံးသ႐ုပ္ေ ဆာင္ နိုင္ခဲ့တာေ ၾကာင့္ပရိတ္သ တ္ေတြ ရဲ့ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကိုအ ခိုင္အမာရရွိ ထားပါတယ္ေ နာ္။ အခုတစ္ ခါမွာဆိုရင္သ ႐ုပ္ေဆာင္အိျႏၵာေက်ာ္ ဇင္ကသူမရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ တံဆိပ္တ စ္ခုျဖစ္တဲ့အိၿန ၵာေက်ာ္ ဇင္ေရေမႊးကို တရားဝင္ေရာ င္း ခ်လာတဲ့အေၾကာ င္းကိုအခုလိုေျ ပာျပထားပါတ ယ္ေနာ္။ … Read more
ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလောက်အောင် အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ အခြေနေကြီး (ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမှာလဲ)
ျမန္မာျပည္မွာ စာသင္တယ္။ စာအုပ္ေအာက္ျပဳတ္က်ရင္ စာမရမွာေၾကာက္လြန္းလို႔ စာအုပ္ကို ကန္ေတာ့ၾကတဲ့ ကေလးေတြ ဘြဲ႕ရလာၾကေပမယ့္ ေတာ္သင့္႐ုံဘဲ တတ္သြားၾကတယ္။ စာအုပ္ထဲ ရွိၿပီးသားစာေတြကို မွတ္စုကူးၿပီး ၏/သည္မေ႐ြးက်က္ရတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ပထဝီေတြ သမိုင္းေတြအလြတ္သာက်က္ခဲ့ရတယ္ ေမးလိုက္တဲ့ခါ အမ္.. အင္.. ဟုတ္မယ္.. အဲ့လိုေလးေတြနဲ႔ၿပီးခဲ့တယ္.. ေခါင္းထဲမေရာက္ခဲ့ၾကဘူး။ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြကို လက္ေတြ႕မဝင္မေလ့လာခဲ့ဘဲ ဘြဲ႕ရခဲ့တဲ့ဆရာေတြက သိပၸံဘာသာရပ္ကို Definition မွာ ‘s’တစ္လုံးက်န္ရင္ အမွတ္ေလွ်ာ့ဖို႔ မွင္နီကိုင္ၿပီးေစာင့္ေနၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ကေလးေတြ စက္႐ုပ္တီထြင္ ေဆာ့ဝဲလ္ ေရးေနၾကခ်ိန္မွာ ဒီမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စာ ညံ့လြန္းလို႔ Definition တစ္ေၾကာင္းကို နာရီဝက္ေလာက္က်က္ေနရၿပီး ဒါေမးဒါေျဖကိုေတာင္ ေသာက္ေသာက္လဲက်ေနၾကတယ္.. ဘာမွမသင္တဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္ရင္ ရစ္မွာစိုးလို႔ ေန႔တိုင္းသြားထိုင္ေနရတယ္.. တကယ္စာသင္ေပးတဲ့ေနရာေတြကိုေတာ့ ေငြေပးၿပီးသင္ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ‘အခမဲ့ပညာေရးစနစ္’ လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကတယ္။ တကယ္စာသင္ရမယ့္ … Read more
အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရာ နားငြီးလို့ဆိုပြီး
အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရာ နားငြီးလို့ဆိုပြီး ဖုန်စုပ်စက်ရဲ့ပလပ်ကိုကိုက်ဖြုတ်ပြစ်ခဲ့သည့်ဝက်ကလေး ေရွးလူႀကီးမ်ား၏အဆိုအရ ဝက္မ်ိဳးစိတ္ေတြဟာအနည္းငယ္ညစ္ပတ္ေသာမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္ဟုဆိုၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္းလူအခ်ိဳ႕တို႔သည့္ ခ်စ္စဖြယ္ဝက္ကေလးေတြကိုေနအိမ္ေပၚတြင္ေခၚထားၿပီးမိသားစုဝင္ေတြလိုေမြးျမဴထားတတ္ၾကပါတယ္။ ယခုတြင္လည္း အေမရိကန္ေကာ္လိုရာဒိုရွိ ေနအိမ္တစ္ခုမွေမြးျမဴထားေသာဝက္ကေလး၏အျပဳအမူဟာ ျမင္ေတြ႕သူတိုင္းကိုခ်စ္စဖြယ္ရာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ဝက္ေလးဟာအိမ္၏ဆိုဖာေပၚတြင္ဇိမ္က်စြာအိပ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထိုအခ်ိန္တြင္သခင္ျဖစ္သူကဖုန္စုပ္စက္ျဖင့္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခဲ့ရာ စုန္စုပ္စက္သံေၾကာင့္ဝက္ကေလးကႏိုးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဝက္ကေလးကအိပ္ရာကထလာၿပီးဖုန္စုပ္စက္ပလပ္ေပါက္ကို သူ၏ပါးစပ္ျဖင့္ကိုက္ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ Shoon (Cele Daily) Unicode အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရာ နားငြီးလို့ဆိုပြီး ဖုန်စုပ်စက်ရဲ့ပလပ်ကိုကိုက်ဖြုတ်ပြစ်ခဲ့သည့်ဝက်ကလေး ရှေးလူကြီးများ၏အဆိုအရ ဝက်မျိုးစိတ်တွေဟာအနည်းငယ်ညစ်ပတ်သောမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟုဆိုကြပါတယ်။သို့သော်လည်းလူအချို့တို့သည့် ချစ်စဖွယ်ဝက်ကလေးတွေကိုနေအိမ်ပေါ်တွင်ခေါ်ထားပြီးမိသားစုဝင်တွေလိုမွေးမြူထားတတ်ကြပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း အမေရိကန်ကော်လိုရာဒိုရှိ နေအိမ်တစ်ခုမှမွေးမြူထားသောဝက်ကလေး၏အပြုအမူဟာ မြင်တွေ့သူတိုင်းကိုချစ်စဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဝက်လေးဟာအိမ်၏ဆိုဖာပေါ်တွင်ဇိမ်ကျစွာအိပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်သခင်ဖြစ်သူကဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ရာ စုန်စုပ်စက်သံကြောင့်ဝက်ကလေးကနိုးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင် ဝက်ကလေးကအိပ်ရာကထလာပြီးဖုန်စုပ်စက်ပလပ်ပေါက်ကို သူ၏ပါးစပ်ဖြင့်ကိုက်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily
နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း လေ၊ မိုး၊ လျှပ်စီးမိုးကြိုး ရှယ်ဝုန်းတော့မယ့် ဒေသများ
သုံးခွ တံတား သီလဝါ သံလျှင် ဒလ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရန်ကုန် 09/05/2022 မနက် လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုးမိုး 🌧🌧🌧 နောက်၂၄နာရီအတွင်း နွားထိုးကြီး ငါန်းဇွန် မြင်းမူ အုန်းတော ကျော်ဇေယျာ ဆားတောင် လှတော ဝက်လက် ရွှေဘို ရေဦး ခင်ဦး ကာဘိုး တန့်ဆည် ကန်ထူးမ ဇီးကုန်း တကောင်း သပိတ်ကျင်း ပြင်ဦးလွင် ဝက်ဝံ အနီးစခန်း အုန်းချော ပုသိမ်ကြီး မတ္တရာ မန္တလေး အမရပူရ စစ်ကိုင်း အင်းဝ တံတားဦး မြို့သာ ပုလိပ် မြစ်ငယ် ကျောက်ဆည် ဒေသများတွင်မိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ 09/05/2022 ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် မကွေးတိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးရွာနိုင်ပါတယ် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါ။ မေ ၁၁ရက်နေ့အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် … Read more
အမေဖြစ်သူက နေမကောင်းတာကြောင့် မိသားစုအားလုံးအစားစားနိုင်ရန်အတွက် သူတန်ဖိုးထားရတဲ့ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်ရောင်းချနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦး(ရုပ်သံ)
အမေဖြစ်သူက နေမကောင်းတာကြောင့် မိသားစုအားလုံးအစားစားနိုင်ရန်အတွက် သူတန်ဖိုးထားရတဲ့ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်ရောင်းချနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦး(ရုပ်သံ) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Quezon City မြို့ရှိ Kenneth Pangilinan အမည်ရှိကောင်လေးတစ်ဦးဟာ ထက်မြက်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲများမှ ဆုတံဆိပ်များစွာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။Kenneth ဟာ အမေနှင့်အစ်ကိုဖြစ်သူတို့နှင့်အတူ သေးငယ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာ နေထိုင်ကြပြီး Kenneth ဟာ သူ့ရဲ့ဆုတံဆိပ်များက သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဆုတံဆိပ်များဟာ ၎င်းတို့နေအိမ်ရဲ့အဓိကနေရာမှာ ရှိနေပြီး ၎င်းဟာ သူ့မိသားစုအတွက် ဂုဏ်ယူစရာအဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Kenneth ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ လုံခြုံရေးအစောင့်နှင့်သန့်ရှင်းရေးသမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ပြီး သူမဖျားနာလာတဲ့အခါ မိသားစုမှာ စားစရာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ဆုတံဆိပ်တွေက အဖိုးတန်ပေမဲ့ အစားအစာက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ တွေးထင်နေခဲ့တာကြောင့် Kenneth ဟာ မိသားစုစားသောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် သူ့ရဲ့ဆုတံဆိပ်များကို ရောင်းချရန် စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Kenneth ရဲ့ ဆုတံဆိပ်ရောင်းတဲ့ … Read more
မြန်မာနိုင်ငံလာပီး မယ်သီလရှင် အပြီးဝတ်လိုက်တဲ့ ချစ်စရာအီတလီနိုင်ငံသူလေး ဂေါတမီ ရတနာ
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုလွန်းလို့ သီလရှင်အဖြစ် သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အီတလီနိုင်ငံသူ ဂေါတမီရတနာ ပရိတ်သတ်ကြရေ၊ အခုတ စ်ခါမှာဆိုရင်တော့ အီတလီနိုင်ငံသူေ ဂါတမီရတနာက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညို လွန်းလို့မယ်သီလရှင်အ ပြီးဝတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းကိုအ ခုလိုပြောပြထား ပါတယ်နော်။ အီတလီနိုင် ငံသူဂေါတမီ ရတနာကဗုဒ္ဓဘာ သာကို ကြည်ညိုလွန်းလို့မ ယ်သီလရှင် အပြီးဝတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း ကိုသူမရဲ့လူမှုကွန် ယက် ထက်မှာအခုလိုေြ ပာပြထား ပါ တယ်နော်။ ရန်ကုန်တို င်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ လှည်းကူး-ဖောင်ကြီးလမ်း၊ စာဘူးတောင်းေ ကျးရွာနယ်မြေရှိ မဂ္ဂဖလဝိဟာရ အပြည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဝိပဿနာတောရ တွင် အီတလီနိုင်ငံသူ ဂေါတမီရတနာက ဆံချကာ သီလရှင်ဆရာေ လးအဖြစ် သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ကာ နိဗ္ဗာန်ေ ရာက်ကြောင်း ဝိပဿနာ တရားများကို … Read more
ထိုင်းဆရာတော်ပေးတဲ့ (3D)အပိုင်တစ်ကွက်….. မှန်လွန်းလို့ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရတဲ့ ထိုင်းဆရာတော်ရဲ့ သိန်းတစ်ရာတန် 3လုံးထီ ဒိုင်ကွဲ ဂဏန်းရပြီ။ အောက်ဆုံးပါ(၇)ရက်သားသမီး အားလုံးရစေဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားပါတယ် ထွက်ရှိမဲ့ 3D ဒဲ့ပေါက်ဂဏန်းဒဲ့ (1)ကွက် အပိုင်ချပေး နေပါပြီနော်။ သိန်း(100)တန် ထိုင်းvipကဒ် အစစ်ပါ အနီးကဒ် ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ ဒီအပင် ဒီအကြိမ်မှာ ချဲပေါက်ချင်သူ မှန်သမျှ ပေါက်ဖူးသွားစေရမယ် ငွေတွေကို အလျှံအပယ်သုံး ငွေကိုရေလိုသုံး/ငွေဒင်းဂါးကို ထွေခင်းကစားမယ် ချဲကိုတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးသူများ သိန်းရာငွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး သိန်းရငွေလက်ကြီး အောရဲပါတယ် အမိအရ ထိုးရဲပါတယ် သေချာလိုကတော့ အိမ်ပေါင် မြေပေါင် ထိုးရဲပါတယ်ဆိုရင် 100% အာမခံ ပေါက်ဂဏန်းကို ချပေးပါမယ် ဒီတစ်ကြိမ်မှာ မဖြစ်မနေ ယူထိုးရင် ချဲပေါက်၍ … Read more
လွတ်မြောက်နယ်မြေက ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ရေးသားလာတဲ့ MRTV သတင်းတင်ဆက်သူ ဦးကျော်သက်လင်းရဲ့ See more.
ပရိသတ်ကြီး‌ရေ သတင်းတင်ဆက်သူ ဦးကျော်သက်လင်း ဟာ လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲမှာ ရောက်ရှိနေရင်း ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ လူမူ့ကွန်ယက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် အဆက်အသွယ်မပျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတင်ဆက်သူ ဦးကျော်သက်လင်း ဟာ လွတ်မြောက်နယ်မြေက မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ တစ်သက်လုံးအတူနေလာတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ခွဲခွာခဲ့ကြရလို့အပူမီးတွေနဲ့အသားကျလာတဲ့အခါမှာပဲ… လပေါင်းများစွာကြာရင်းနှီးနေထိုင်လာကြတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေတချို့ သားငယ် သမီးငယ်တချို့ ကျနော်ရှိနေတဲ့နေရာက နေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စွန့်ခွာသွားကြပြန်ပါတယ်။ ရုံးဌာန ကျောင်းပေါင်းများစွာ မြို့ပေါင်းများစွာ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာ နေရာပေါင်းများစွာ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့ဘူးသူအနေနဲ့ အဆန်း တော့မဟုတ်ပေမယ့် သံယောဇဥ်တွေက ခွဲခွာကြတိုင်း နာ​ကြင်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ တာဝန်နဲ့ပြန်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရေနွေးသောက်ဖို့ခေါ်ရင်း စကားထိုင်ပြောကြတော့ ဒီနေ့ ကျနော့် အမေမြေချတဲ့နေ့ပါတဲ့။ သူတာဝန်နဲ့သွားတဲ့နေ့က သူ့အမေကွယ်လွန်တဲ့နေ့….ဒီလိုပါပဲ ကျနော်နေတဲ့​ နေရာမှာရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေရဲ့ … Read more
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား မချစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကတော့……
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား??? ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ဖူးပါ ကျွန်တော် အခုလို ပြောလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပချစ်သူစာအုပ် လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရသူတစ်ဦးလို့ သမုတ်ရင်လည်း ကျွန်တော် မငြင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ အဓိက ပြောချင်တာက ရာမမင်းသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာပါ ကျွန်တော် မြင်ထားတဲ့ အမြင်လေးတစ်ခုပေါ့ ရာမမင်းသားက မယ်သီတာကို ချစ်,မချစ် ဆိုတာကိုပေါ့ ဇာတ်လမ်းကို စပြီး ပြောရရင် မယ်သီတာ ကြင်ယာရှာတဲ့ လေးတင်ပွဲတစ်ခုမှာ ညီတော် လက္ခဏက ဝင်ပြိုင်ချင်တဲ့ အချိန်မှာတောင် နောင်တော်ရာမက ဒီကိစ္စ ငါတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ရှောင်နေခဲ့တာပါ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တစ်ပြည်သားလို့ပဲ ပြောရမလားဇာတ်တော်ထဲကလို ဘီလူးလို့ပဲ ပြောရမလား ဒဿဂီရိက … Read more
သားသမီး၇ယောက်ရှိသော်လည်း ပြုစုစော င့်ရှော က်ပေးမဲ့သူ မရှိလို့ ဆေးရုံစင်္ကြံမှာ See more..
သားသမီး၇ယောက်ရှိသော်လည်း ပြုစုစော င့်ရှော က်ပေးမဲ့သူ မရှိလို့ ဆေးရုံစင်္ကြံမှာ အိမ်အဖြစ်နေ ထိုင်နေရတဲ့ မိခင်အိုကြီးရဲ့ သနားစရာဘဝ အသက် ၆၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စ Huong ကအသ က်ကြီးမှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သားသမီးမြေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းမယ့်အစား ဆေးရုံစင်္ကြံမှာသူ့အိမ်အ ဖြစ် နေထိုင်နေရပါတယ် ။ ယခင်က မစ္စ Huo ng ဟာနေ့တိုင်း သီချင်းဆိုခြင်းဖြင့် ကလေး၇ ဦးကို အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ကျွေးမွေးခဲ့ရပါတယ် ။ အများကြီး အကုန်အကျခံပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီမိခင်ဟာသူ့သားသမီးတွေရဲ့ ဥပေက္ခာပြုခြင်းကို ခံရပြီးဆေးရုံမှာအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဆေးရုံရှိ ဆရာ ဝန်များ၊ သူနာပြုများနဲ့ လုံခြုံရေးအစောင့်နှစ်ဦးစလုံးက သူမရဲ့မျက်နှာကို သိပြီး အခက်အခဲမရှိအောင် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကူညီခဲ့ကြပါတယ် ။ သူမက ထီထိုးရောင်းတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း … Read more